DEG DEG: Madhab-baa in Raysalwasaaraha Itoobiya geeriyooday ama ku jiro Xaalad Caafimaad darro? – Puntlandtimes
DEG DEG: Madhab-baa in Raysalwasaaraha Itoobiya geeriyooday ama ku jiro Xaalad Caafimaad darro?
August 10, 2018 W LAASCAANO
Dr Abiy Ahmed Hassan RW cusub ee Itoobiya
ADDIS ABABA(P-TIMES)- Si weyn ayaa baraha Bulshada loogu wadaagay xogaha ku saabsan in uusan caafimaad taam ah qabin Ra’iisulwasaaraha Itoobiya Dr Abi Ahmed oo sameeyey isbedelo waa weyn tan iyo markii uu xilkaas qabtay horaantii Bishii April ee sanadkan, waxaana dadka wararkan faafiyey u badan qowmiyadda uu ka soo jeedo ee Oromada oo ay qaarkood aad ugu baraaronayeen.
Ilaa hadda ma jirto cid cadeyn karta xaqiiqada warkan, balse dadka wararkan isku gudbiyey waxay sababaha ku sheegeen in la sumeeyey Dr Abi Ahmed, halka kuwa kalena ay sheegeen in uu wajahay Dhiigar oo uu madaxa dhiig kaga furmay, sidaasna lagu dhigay mid kamid ah Isbitaalada Ammaankooda la sugo ee kuyaala gudaha dalka Itoobiya.
Warbaahinta dalkaas oo uu marar badan kasoo muuqan jiray ugu yaraan 24 saac labo jeer, ayaan muuqaalkiisa iyo codkiisa midna laga heynin waana arrin kale oo welwel galisay taageerayaashiisa qaarkood oo hadda dalbanaya in uu ka hadlo arrimahan.
Isbedelo waa weyn ayaa ka jira gudaha Itoobiya, Ra’iisulwasaare Abiy-na wuxuu xooga saaray sidii uu isbedel ugu sameyn lahaa waqtigan Ismaamul gobaleedyada, isagoo ku bilaabay Ismaamulka Soomaalida oo ilaa hadda mushkilad weyn ka haysato, gaar ahaana ciidamadii daacada u ahaa Mr, Cabdi Illey oo diiday in ay taageeraan go`aanka xil ka qaadista Madaxweynahoodii.
Sidda lagu cadeeyey barta Twitter-ka ee Xaafiiska Ra’iisulwasaaraha Itoobiya wuxuu wataa shaqadiisa caadiga ah, waxaana sawirro lasoo dhigay ka muuqanaya isagoo shalay qaabilay Wasiirka Arrimaha dibada ee Sacuudi Careebiya oo socdaal kutagay Asmara iyo Addis Ababa, isla markaasna amaanay dadaalada nabdeed ee ay labada dhinacba wadaan.
Sidaas oo kale waxaa ugu dambeeyey in uu Raysalwasaaraha Itoobiya qaabilay wafdi ka socda dawladda Imaaraatka Carabta, gaar ahaana ay hogaaminayso Wasiirka Maalgashiga caalamiga ah Marwo, Reem Al Hashimy, uuna ka gudoomay dhambaal uga yimi Dhaxalsugaha Boqortooyada Imaaraatka Carabta.
Is weydiinta hadal la’aanta Raysalwasaare Abiy iyo marxaladaha adag ee uu dhex-dabaalanaya ayaa ku wajahan xaalad adag oo ku saabsan waqtiga lagu jiro, shaki ma saarna in uu wajahay culeys amni iyo siyaasadeed kii ugu adkaa, waxaana loolan adag kula jira Saaxiibadiisa Xisbiga TPLF oo aad uga careysan ficilada uu qaadayo.
Abiy waa nin fulinaya danta oromada isagoo garabsanaya dowlado shidheeye oo carab u badan oo waliba kula taliyey in uu ka bilabaabo isbalka oromada loogu danaynayo qowmida somaalida oo aan taageero shisheeye iyo tu sokeeye haysan. Markaasna uu ku xijiyo qowmiyada tigreega oo awoodoodu aad u sareyso laakiin haysan taageero shisheeye iyo tu sokeeye toona. Qowmiyada somalida iyo tan tigreega sida kaliya oo ay ku badbaadi karaan ama ku sii jiri karaan waxay tahay oo kaliya ayagoo isla safta oo usku mauqiif nogda maadaama aya labaduba cadow xoog bada oo taageero caalami ah haysta uu rabo in uu cirib tiro. Qowmiyada oromadu waa qawmiyada kaliya ee itobia oo dhul balaaris iyo dad baabi’is uu u yahay tiirka siyaasadeed oo ay ku taagan yihiin. Waxay aaminsanyihii in wadanka somaaliya ay ayagu lska lahaayeen oo sommalidu ka barakicisay qarniyaal hore. Iskaba daa warkiisa dhulka somaaliyeedoo itobia ka midka ah. Fursada hada oromada soo martay waa fursad dahabi ah oo oromadu aaminsantahay in ay mar kale soo marahayn. Waxay isku raaceen gar iyo gardaroba in ay ka faa’iideystaan oo ka miradhaliyaan fursadaan lowlaa xaataa ay sababayso burburka ethiopia. Amxaaradii ayaga lajirey ayay hada fooda saareen oo dhul beereed baaxadleh ka qabsadeen. Amxaaradii filan waa iyo amakaag aya ku dhacay oo godkoodii ayaa biyo ugu soo galeen. Madaama ay qowmiyada somaaliyeed ee itobia ay garab iyo gargaar af-ba toona ka helahayn farmaajo iyo dowladiisa waa in ay qowmiyada somaaliyeed ee itobia gaashaan buur la sameystaan qowmiyadaha kale ee itobia oo ay miiska biraynta wada saaran yihiin.
Puntland oo sheegtay inay hawlgal ku dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab
DHAGAYSO:Puntland oo shaacisay ciqaabta la marin doono ragii kufsaday Caa’isha Ilyaas iyo Gabdho kale oo badan
DEG DEG:Madaxweyne Denni oo galka seefta kala baxay & Taliye cusub oo uu magacaabayo kadib markii….
DAAWO:Axmed Karaash oo daah furay Talaalka dabaysha Caruurta 5 sano ka yar
DAAWO:Muuse Biixi oo u qalab qaatay bur burinta Somaliland & Wasaarado muhiimo ah oo albaabada la iskugu dhufan rabo
DAAWO:Jiidaha Yubbe oo gaadiid badan uu kusii lagu sii qul qulayo & Ciidamada Puntland oo gurmad ka helay shacabka Sanaag kadib markii….
DEG DEG+DAAWO:Rasaas xoogan oo saaka laga maqlayo jiida hore ee Yubbe & Dagaalkii Puntland Iyo Somaliland oo daafaha u baxay xili Haweenka Badhan….
DAAWO:Ciidamada Somaliland oo wajahaya dagaal labo dhinac ah, Xiisada G. Sanaag, Ciidamadii ugu badnaa oo kusii qul qulaya & Jabhadda Caarre oo
Georgina Rodriguez oo la aamusiin kari waayey & Ronaldo sameeyey oo arin la yaab leh
Arimaha Qoyska: Sidee Ku Jiidan Kartaa Qalbi Ka Sii Jeeda ? Talooyinkaan Raac